10+ Serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Fialam-Boly
Ny streaming dia iray amin'ireo fialamboly tsara indrindra amin'ny fotoana ankehitriny, ananany boaty napetraka ambony sy ireo tariby midadasika ireo miasa fa ankehitriny dia mila fitaovana kely fotsiny ianao, ary vonona ny handeha, plus azo antoka kokoa izy io ary hanome anao atiny voafantina izay tianao hojerena.
Noho izany, izahay dia nanomana lisitra amin'ny antsipiriany ho anao miresaka momba ny sasany amin'ireo Serivisy TV Streaming tsara indrindra. Koa andao izao mankany amin'ny lisitry ny serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra.
Serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Lisitra voalohany
Hitanao ho avy ity iray ity. Ity no serivisy streaming tsara indrindra misy ankehitriny. Ny sarany isam-bolana dia ambany ihany raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminy. Ny tombony tsara indrindra amin'ity serivisy ity dia ny fampisehoana aminao ny atiny tianao amin'ny algorithms omenao azy ireo. Iray amin'ireo seho tsara indrindra toa ny Breaking Bad miaraka amin'ny salan'isa IMDB 9,5, ny zavatra Stranger miaraka amin'ny laharana IMDB 8.8, Mindhunter miaraka amin'ny laharana IMDB 8,6. Ireo seho mahafinaritra rehetra ireo dia hita ao amin'ny Netflix handefasana.
Afaka miditra amin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny android, tv android, ary Mac / iOS / Apple tv ianao. Netflix dia mendrika anao isaky ny denaria tokana. Fanampin'izay, ny tena izy ireo dia iray amin'ireo fampisehoana tsara indrindra natao hatrizay. Maro amin'izy ireo no nahazo ny loka Golden Globe. Netflix dia toy ny manana kalitao mihoatra ny habetsahana. Ny totalin'ny isa. ny lohateny miaraka sarimihetsika sy seho dia 5 665.
Ity ny fanapotehana ny drafitry ny vidin'ny Netflix:
Drafitra ifotonymiaraka amin'ny efijery iray:$ 9.
Drafitra mahazatramiaraka amin'ny efijery roa:$ 13.
Drafitra Premiummisy efijery efatra:$ 16.
Izany dia bebe kokoa amin'ny lafiny habetsahana ary manolotra fividianana fandaharana amin'ny fahitalavitra betsaka. Izy io dia iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra amin'ny Netflix. Manana fomba hafa amin'ny atiny 'curated' izy; manivana ny atiny amin'ny alàlan'ny naotin'ny IMDB izy ary mifototra amin'ny toe-tsainao. Avelao aho hanazava ny tena toetrany, faly, malahelo, te hanao hetsika, mampihetsi-po, afaka mahita atiny mifototra amin'ny toetranao ianao.
Misy safidy maro ao amin'ity serivisy streaming ity koa. Na izany aza, mety tsy mahita azy ireo mahafa-po toa an'i Netflix ianao. Ambany kokoa ny vidiny, ary ny sasany amin'ireo lohateny tsara indrindra dia ny laharana Family man IMDB 8,6, Petal Look miaraka amin'ny isa IMDB 7.8, Mirzapur miaraka amin'ny naoty IMDB 8,5, Tom Clancy's: Jack Rayan miaraka amin'ny laharana IMDB 8,5. Ny totalin'ny isa. ny lohateny ao amin'ny Amazon Prime Video dia 20 392.
Ny famandrihana isan-taona ho an'ny horonantsary Amazon Prime dia mitentina $ 99.
Sarimihetsika Disney tianao amin'ny fahazazanao? Ity no safidy mety indrindra ho anao. Ity serivisy ity dia misy ny sarimihetsika Disney rehetra mandrakizay. Manomboka amin'ny Snow White ka hatrany Avengers, tsy misy fetra ny atiny omen'i Disney. Ny maharatsy azy fotsiny dia ny mety ho vitsy kokoa ny seho na ny sarimihetsika mety tsy nojerenao. Izany dia toy ny diabe lalina midina amin'ny lalan'ny fahatsiarovana.
Na izany aza, satria vaovao ny Disney, dia mbola manandrana mitondra anaram-boninahitra bebe kokoa amin'ny sasany amin'ny lohateny izy ireo dia misy ny Mandalorian miaraka amin'ny isa IMDB 8,7, ny valin'ny Avengers Endgame IMDB 8,4, ny Toy Story-3 IMDB naoty 8.3. Ny totalin'ny lohateny ankehitriny dia fizarana 7000 ary sarimihetsika 500.
Ny drafitra ho an'ny Disney + dia mitentina $ 69,99 isan-taona.
Ny HBO dia mifantoka kokoa amin'ny atiny mazava sy ireo olona izay tia zavatra hafa. Ny lohateny tsara indrindra tamin'ity serivisy streaming ity dia ny naoty Game Of thronesIMDB an'ny 9.3, naoty Chernobyl IMDB 9,4, naoty Watchmen IMDB an'ny 8.1, naoty Westworld IMDB an'ny 8.7. Tsara ny atiny, fa tsy ny olon-drehetra no mankafy azy. Na izany aza, azonao atao ny manandrana ny vintanao ary hahitana raha mifanaraka amin'ny tsironao izany.
Ny ligin'ny Justice izay nandrasana indrindra dia hatao premiere ao amin'ny HBO max amin'ity fahavaratra ity mba ho toa manantena zavatra ho an'ny HBO ny raharaha. Ny isan'ny lohateny dia 2000.
Ny drafitra HBO dia mitentina 142,8 $ / taona.
Ny seho rehetra dia mifototra amin'ny kolontsain'i Amerika, saingy manana fampisehoana tsara any amin'ny làlany izy ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia laharana sivy sivily IMDB any Brooklyn an'ny IMDB 8.4, Ity ny laharana Us IMDB an'ny IMDB: 8.7, naoty Grey's Anatomy IMDB an'ny IMDB: 7.6. Ireo dia seho izay mety tsy tianao ho diso anjara. Na izany aza, ireto dia seho sasantsasany izay azonao jerena tsy ara-potoana ary tsy mila tsangambato mahafinaritra.
Toy ny HBO izany, azonao atao ny manandrana ny vintanao amin'ny atiny mety tianao na tsy tianao. Raha mpankafy an'i Aron Paul ianao dia ho tianao ity serivisy ity; raha tsy izany dia tsy afaka mametraka ny tenany izy. Ny totalin'ny lohateny misy dia mihoatra ny 43000 (araka ny filazany).
Ny vidin'ny Hulu dia $ 71.88 / taona.
6. Ny CW
Ny tselatra, zana-tsipika maintso, jiro mainty. Ity no serivisy streaming tsara indrindra ho anao. Ny mahery fo DC rehetra dia tafiditra ao amin'ity fonosana ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo ny buzz eran'ny tanàna noho izy ireo nitondra maherifo mandritra ny fiainana.
Ny tena zava-dehibe dia maimaim-poana ny mijery tsy misy famandrihana na adiresy mailaka ilaina.Raha te hijery ny geek anatiny ianao dia tokony hanandrana ny CW. Ny totalin'ny lohateny misy dia 30.
Vidin'ny famandrihana:Maimaimpoana ny CW.
Apple tv + dia manana fanangonana fampisehoana sy sarimihetsika tsara. Fampisehoana toy ny See with IMDB rating of 7.6, The Morning Show IMDB rating of 8.4, Ted Lasso IMDB rating of 8.7. Izy ireo dia ahitana fampisehoana roa izay mitazona ny sainao mandritra ny fotoana lava ary fampisehoana izay natao hijerena fotsiny.
Satria vaovao eo amin'ny tsena izy ireo dia manana fampisehoana maromaro voafetra hatolotra, fa manana kalitao ihany koa. Ny cinematography dia iray amin'ireo tsara indrindra raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminy hafa. Ny totalin'ny lohateny dia 45.
Maimaimpoana ny taona voalohany amin'ny famandrihana fianakaviana, na afaka misafidy ny tolotra ho an'ny mpianatra ianao ary mitaky izany maimaim-poana amin'ny mozika paoma amin'ny $ 0,61 / volana fotsiny.
Anime ilay karazana iray hitan'ny rehetra. Dragon ball z nandre momba izany? Alao an-tsaina ange fa efa nanafatra sakafo sy anime mangatsiaka miaraka amin'ny fiononan'ny tranonao ianao. Ity nofy ity dia mety ho tanteraka amin'ny Crunchyroll. Ity tranonkala ity dia manana ny fanangonana anime lehibe indrindra izay atolotra.
Manomboka amin'ny Naruto ka hatramin'ny Death Note, ny anime rehetra azonao eritreretina dia ho hita ao amin'ny tranombokin'izy ireo. Tokony handinika ny fijerena anime ianao. Tontolo vaovao iray manontolo amin'ny fialamboly mbola tsy voarindra. Ny isan'ny lohateny ankehitriny dia 1000+.
Maimaimpoana tanteraka i Crunchyroll miaraka amin'ny doka, saingy afaka mandoa $ 7,99 / volana ianao mba hialana amin'ny doka.
Raha tianao ny seho resaka, ity no sehatra tsara kokoa noho ny fampisehoana anio alina miaraka amin'i Jimmy Fallon miaraka amin'ny laharana IMDB 7.3. Samy tia seho lahateny sy votoaty tsy misy dikany ny rehetra, izay tsy mitaky antsika hanitatra sy hanongilana ny saintsika. Ny fotoana miala sasatra miaraka amin'ny ankohonana dia afaka mankafy amin'ny Peacock.
Tsy maintsy misafidy ny safidy premium ianao satria tsy hampiato ny doka fitifirany eo amin'ny efijeryo isaky ny dimy minitra. Ny totalin'ny lohateny azonao dia 60+.
MAIMAIMPOANA ny vidin'ny Peacock amin'ny doka, saingy afaka mandoa $ 100 / taona ianao raha maniry hiaina streaming tsy misy doka.
Lahatsary YouTube miampy izay no atiny premium an'ny YouTube . YouTube koa dia manana seho maro isan-karazany sy tany am-boalohany izay natokana ho azy ireo ihany. Saingy misy ny antony mahatonga izany ambany dia ambany amin'ny lisitray. Satria ambany dia ambany ny haavon'ny fiarovana, ary tsy dia mahaliana ny olona ny atiny.
Azonao atao ny manalavitra izany fifanarahana izany. Na izany aza, azonao atao ny mankafy anaram-boninahitra toa an'i Cobra Kai miaraka amin'ny naoty IMDB 8.7, Step Up Highwater miaraka amin'ny laharana IMDB 7.5 Fa na ny lohateny toy izany aza dia efa fantatr'i Netflix ankehitriny.
Manana fitsarana iray volana maimaim-poana izy io. Mitentina $ 11,99 / volana.
Manantena aho fa nahazo fahitana mazava kokoa momba ny serivisy mivantana ianao amin'ny famakiana ny lahatsoratray. Ny safidy tsara indrindra dia ny misafidy ny Amazon Prime Video na Netflix satria iray ny kalitao, ary ny iray hafa dia ny habetsany. Tsy misy fatiantoka, satria samy tonga amin'ny ambaratonga antonony izay misy ny vidiny. Raha manana sosokevitra fanampiny na add-on an'ity lisitra ity ianao dia alao ao anaty boaty fanamarihana.
Voidtrain: Tonga amin'ny Xbox sy PS4 ve izany?
Rahoviana ianao no afaka mahita ny natsanganan'ny Wolves Season 2?
sarimihetsika an-tserasera feno feno
mijery sarimihetsika farany maimaim-poana
manana mpizaha tranonkala ve ilay roku 3?
manakana ny lalao fananganana toy ny minecraft
maimaimpoana ny sarimihetsika